Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Dhimaya Ciidamada Africa Ka Jooga.
Maraykanka oo Dhimaya Ciidamada Africa Ka Jooga.
Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa sheegaysa in ciidamada kumandoosta ah ee Maraykanka ay kala soo baxdo dalka Niger, isla markaana ay soo xidho badi xeryaha ay deggan yihiin ciidamada aragixiso la dirirka ah ee qaaradda Afrika, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times.
Saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha militariga Maraykanka ee ku yaalla dalalka Camaroon, Kenya, Libya, iyo Tunisia, iyagana la soo xidhi doono, haddii Xoghayaha Gaashaandhigga, Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. Hase yeeshee, militariga Maraykana ayaa si weyn u sii joogi doona dalalka Nigeria iyo Somalia.
Sida wargeysku qoray, talaabadani waxay qeyb ka tahay istaraatiijiyad uu Maraykanku culeyska ku saarayo dagaalka baaxaadda weyn leh, halkii uu kooxo mintidiin ah uu dagaal kula jiri lahaa. Talaabadan ayaa sidoo kale timid, ka dib markii afar askari oo ku sugnaa dalka Niger la dilay, kuwaas oo wasaaraddu ay qiratay in gaabis dhinaceeda ka yimid ay ku dhinteen.